Ogaden News Agency (ONA) – Kulan Muhiim Ah oo Maanta Xagardheere Kaqabsoomay.
Kulan Muhiim Ah oo Maanta Xagardheere Kaqabsoomay.
Maanta oo Sabti ahayd taariikhduna ay kubeegnayd 18/8/18 waxaa xerada qoxootiga Xagardheere ee deegaanka Faafi kaqabsoomay kulan muhiim ah oo faraca Iftin uu uqabtay bulshada qaybaheeda kala duwan.
Kulankan oo ahaa mid muhiim waxaa siwayn uga sooqayb galay Odayaal, Aqoonyahan, Haween iyo Dhalinyaro fara badan oo kamid ah bulshada Soomaaliyeed ee Xagardheere kusugan.
Kulankan oo ujeedadiisu ahayd gurmadka xoriyada oo baryahanba kasocday guud ahaan qaaradaha aduunka ayaa siwayn uga socday wadanka Kenya, waxaana kulanka maanta lagu casuumay dad macquul ah oo unasab sheegta Soomaalida Ogadenia iyo waliba bulshada Soomaaliyeed.
Gudiga faraca Iftin ayaa siwayn uga warbixiyay xaalada guud ee wadanku uu marayo iyo sida loogu baahan yahay iskaashi iyo isku duubni bulshada Soomaaliyeed ah, waxayna gudigu sheegeen in howl kasta ay dhaqaalo ubaahan tahay.
Dadkii madasha soobuux dhaafiyay oo aad ula dhacsanaa howlaha ay JWXO hormuudka katahay ee socda ayaa kuyaboohay lacago ay dadlka iyo halganka kasocda kucaawiyeen, waxayna howluhu uqabsoomeen sidii loogu talo galay.
Dadka kulanka sooxaadiray ayaa sheegay in ay halganka Ogadenia kasocda iyo mowqofka JWXO taageerayaan kuna qanacsan yihiin go’aanka nadiifta ah ee madaxda JWXO.
Isku soowada duub oo waxaa sinabad ah kusoo dhamaaday kulankii balaadhnaa ee maanta kaqabsoomay xerada Xagardheere ee deegaanka Faafi ee Gobolka Woqooyi Bari Kenya.